Wednesday February 20, 2019 - 16:27:48 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Daaxi Khalfaan waa Taliye ku xigeenka Booliska Dubai
Daaxi khalfaan oo ah taliye ku xigeenka ciidanka booliska imaarada Dubai ayaa futuuxaadkii muslimiinta ee dhulka andalus ay aheyd gummeysi!.
Ninkan Dabadhilifka ah oo awood ku dhax leh dowladda imaaraatka carabta islamarkaana soo qabtay xilal kala duwan ayaa qoraal uu ku qoray bartiisa Twitterka wuxuu dhaliyay cara xooggan oo muslimiintu ka qaadeen axmaqnimadiisa oo banaanka soo dhigayay sida uu uga fogyahay islaamnimada haba sheegto in uu yahay muslim.
Qoraalka mas'uulkan imaaraatiga ah ayaa uqornaa sidaan "muslimiintu muddo sideed qarni ah ayay gumeysanayeen dhulka andalus waa taas andalus usoo laabatay dadkeedii, sabra awood walba waa zuuli doontaa waqtiguba ha dheeraadee".
Hadalka mas'uulkan imaaraatiga ah ayaa lakulmay falcelinno adag oo dhammaantood isku mid ah oo muslimiintu ka bixiyeen, xisaab lagu magacaabo Misri oo kujira Twitterka ayaa isagoo ujawaabayay daaxi khalfaan wuxuu yiri "haddii futuuxaadkii muslimiinta ee andalus aad gummeysi ku tilmaamtay waxay ka dhigantahay in aad ixtilaal utaqaan furashadii muslimiinta ee Makka Al Mukarrama..Bilaadul Faaris iyo dhammaan furashooyinkii islaamiga ahaa".
Dadka ujwaabayay Ninkan axmaqa ah ayaa isugu jiray saxafiyiin,mufakiriin islaami ah,taariikh yahanno iyo dhammaan qeybaha kala duwan ee waxgaradka muslimiinta.
Saxafiga reer Turkiya ee Maxamed Kaanbiikli ayaa isagoo uwajaabay daaxi khalfaan wuxuu yiri "futuuxaadkii islaamiga ahaa mawaxay noqdeen ixtilaal? Nin muslim sheeganaya sidaas ma sameeyaa".
Dadka uwajaabayay mas'uulkan imaaraatiga ah ee gummeysiga ku tilmaamay furashadii muslimiinta ee dhulka Andalus ayaa soo bandhigayay caddeymo cad oo muujinayay sida islaamku xadaaradda rasmiga ah ugaarsiiyay qaaradda yurub xataa waxay kasoo qalin daaranayeen qoraayaal gaalo faransiis iyo Talyaani ah oo sheegayay in furashadii muslimiinta andalus ay dadka reer yurub ka dhaxleen xadaarad iyo hormar, diiwaanka taariikhda waxaa ku cad sida muslimiinta andalus ay baal dahab ah ugu abuureen dadkii xilligaas kunool sababtoo ah waxay geeyeen Nuur mugdigiina waa ka saareen.
Nin magaciisa kusoo gaabiyay Faysal oo Barta Twitterka ku jira ayaa sidaan ugu jawaabay Khaa'in Daaxi kharfaanka imaaraatiga ah "ma aheyn gummeysi ee waxay aheyd in andalus ehelkeedi laga saaray mugdigii loona jiheeyay dhanka nuurka, jahligii ay ka saareen waxayna ujiheeyeen dhanka cilmiga ..dulmigii ay ka qaadeen waxayna ujiheeyeen dhanka cadaaladda, Yurub dhammaanteed horukaceeda waxay ka dhaxashay muslimiintii andalus oo aathaarta islaamiga ayay dowladda Spain ka heshaa lacag tobanaan bilyan oo dollar ah".
Falcelinta dadka muslimiinta gaar ahaan kuwa ku dhaqan caalamka carabta ay ka bixiyeen hadalka mas'uulkan katirsan imaaraadka carabta ayaa banaanka soo dhigaysay sida ay wali ruuxda muslimiinta unooshahay si kasta oo loo gummeysto gaaladuna dagaal ugu hayso hadane taariikhdu waa mid xuseysa halyeeyadii muslimiinta ee islaamka dhiigooda usoo daadshay khawanada dabadhilifyada ah ee gaalada la shaqeynaysa sida madaxda imaaraatka oo kalane waxay taariikhda ka galeen baal dahab ah .
Mid kamida dadkii tacliiqa ka dhiibtay hadalka taliye ku xigeenka booliska imaarada duba ayaa si kooban u yiri "waxaan umalaynayaa in booqashadii Baadariga Faatikaanka Boob Faransiis ayaa maskaxda kaa tirtitay".
isbuuc ka hor ayay dowladda imaaraatka marti gelisay shir ay ugu magac dartay walaaleynta bani'aadanimada shirkaas oo si cad loogu sheegay in kaniisadda iyo masjidka ay isku mid yihiin, magaalada Abu Dubai waxaa layska hareer dhisay masjid loogu magac daray al imaamul akbar oo loola jeedo hoggaamiyaha jaamacadda azahar iyo kaniisad loogu magac daray saanta maariyo oo udhigan baadariga kaatooligga Faransiiska.